डा. दिनेश न्यौपाने - कान्तिपुर समाचार
डा. दिनेश न्यौपानेका लेखहरु :
नेपालमा कोरोनाभाइरसको प्रभावका प्रक्षेपण र बहस
कोरोना भाइरसले नेपालमा कस्तो असर पार्छ होला भनेर धेरै प्रक्षेपणहरु भएका छन् । ती प्रक्षेपणहरुको चुरो कुरा नबुझी सतही टिप्पणीले मात्र जनमानसमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । यी संख्याहरुमा टिप्पणी गर्नु अगाडि तिनीहरुको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिनु जरुरी छ ।
के साँच्चै नेपालमा कोरोनाले कम मानिसहरुको मृत्यु भएको हो?
नेपालमा अन्य देशमा भन्दा कोरोनाको मृत्युदर कम भएको भनेर बारम्बार समाचारहरु आइरहेका छन् । यही सिलिसिलामा हिजो त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि सोही कुरालाई दोहोर्‍याउनुभयो । अझ उहाँले त नेपालीहरुको रोग प्रतिरोधी क्षमता अरु देशका मानिसहरुको भन्दा बढी हुने भनेर गलत जिकिर गर्नुभयो ।
बन्दाबन्दी खोल्नुअघि के गर्ने ?
कोभिड–१९ जस्ता रोगहरु मन्दिरमा बजाइने घण्टीको आकार (बेल सेप) जस्तो गरेर फैलन्छन् । एक जनाबाट सुरु हुने संक्रमण सुरुमा बिस्तारै र केही समयपछि ह्वात्तै माथि जान्छ । निकै माथि पुगेपछि केही समयका लागि प्रतिदिन लगभग एउटै संख्यामा रहिरहन्छ । संक्रमित हुनेको संख्या घटेसँगै ग्राफ पनि ओरालो झर्दै जान्छ ।